May 11, 2021 - Channel Lover
May 11, 2021 by Channel Lover
ပဲခူးတက္ကသိုလ်အနီးမှာစစ်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက် အမျိုးသမီးငယ်တဦးပွဲခြင်းပြီးသေဆုံး ဒီကနေ့ည ၆ နာရီ ၅၅ မိနစ်လောက်မှာ ပဲခူးတက္ကသိုလ် မြို့ရှောင်လမ်းအဆုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကားတစီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစီးဝင်တိုက်ခဲ့လို့ ယဉ်ပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်တဲ့အမျိုးသားကတော့ထိခိုက်ဒါဏ်ရာအနည်းငယ်သာရရှိပြီးမစိုးရိမ်ရဘူးလို့လဲသိရပါတယ်။ Photo – Cj #MyanmarLabourNews unicode ပဲခူးတက်ကသိုလျအနီးမှာစဈကားနဲ့ဆိုငျကယျတိုကျ အမြိုးသမီးငယျတဦးပှဲခွငျးပွီးသဆေုံး ဒီကနညေ့ ၆ နာရီ ၅၅ မိနဈလောကျမှာ ပဲခူးတက်ကသိုလျ မွို့ရှောငျလမျးအဆုံးမှာစဈကောငျစီတပျရဲ့ကားတစီးနဲ့ဆိုငျကယျတစီးဝငျတိုကျခဲ့လို့ ယဉျပျေါပါလာတဲ့အမြိုးသမီးငယျတဦးသဆေုံးသှားတယျလို့သိရပါတယျ။ ဆိုငျကယျမောငျးနှငျတဲ့အမြိုးသားကတော့ထိခိုကျဒါဏျရာအနညျးငယျသာရရှိပွီးမစိုးရိမျရဘူးလို့လဲသိရပါတယျ။ Photo – Cj #MyanmarLabourNews ပဲခူးတက္ကသိုလ်အနီးမှာစစ်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက် အမျိုးသမီးငယ်တဦးပွဲခြင်းပြီးသေဆုံး ဒီကနေ့ည ၆ နာရီ ၅၅ မိနစ်လောက်မှာ ပဲခူးတက္ကသိုလ် မြို့ရှောင်လမ်းအဆုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကားတစီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစီးဝင်တိုက်ခဲ့လို့ ယဉ်ပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်တဲ့အမျိုးသားကတော့ထိခိုက်ဒါဏ်ရာအနည်းငယ်သာရရှိပြီးမစိုးရိမ်ရဘူးလို့လဲသိရပါတယ်။ Photo – Cj #MyanmarLabourNews unicode ပဲခူးတက်ကသိုလျအနီးမှာစဈကားနဲ့ဆိုငျကယျတိုကျ အမြိုးသမီးငယျတဦးပှဲခွငျးပွီးသဆေုံး ဒီကနညေ့ ၆ နာရီ ၅၅ မိနဈလောကျမှာ ပဲခူးတက်ကသိုလျ … Read more
လှိုငျသာယာ မီးခှကျစြေးနားတှငျ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ဖွဈရပျတဈခု ဖွဈပျေါ
လှိုင်သာယာ မီးခွက်ဈေးနားတွင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ် လှိုင်သာယာ မီးခွက်ဈေးနားတွင် ဘိုးတော်​တစ်ယောက် ဗေဒင်ဟောနေတာကို ဘေးကလူငယ်အုပ်စု ၄/၅ယောက်က လှောင်သလိုလို ပြောင်သလိုလိုနဲ့ မျက်နှာပြောင်နေကြ လေသည် …။ ကြာလာတော့ဘိုးတော်လဲ ဒေါသတွေ ထွက်လာပြီး … `ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ငါကိုဘာထင်နေလဲ? ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက်ရေးလိုက်ရင် …. မင်းတို့ဘဝတွေ ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ ?´´ အဲ့ဒါကို လူငယ်အုပ်စုက မကြောက်တဲ့အပြင် ခွက်ထိုးခွက်လန် ဟားတိုက်ရယ်မောပြီး လှောင်ပြောင်နေကြသေးသည် …။ ဒါပေမယ်… ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ သူတို့မျက်လုံးတွေ ဘာမှမမြင်ရတော့ပဲ တစ်လောကလုံးမှောင်မဲ သွားလေတော့သည် …။ အဲ့သည့်တော့မှသူတို့လဲ အသိတရားဝင်လာကြပြီး `အဖိုးရယ်သားတို့ မှားသွားပါတယ် ။ သားတို့ကိုခွင် လွှတ်ပေးပါ´´ လို့အော်ကြဒါပေါ့ အဲချိန်မှာ ဘိုးတော်ပြန်ပြော လိုက်တဲ့စကားက `မသာတွေငါဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး ….။ … Read more
မြင်းခြံမြို့နယ် ရွှေပြည်သာရွာတစ်ရွာလုံး မုန့်ဟင်းခါးအလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူ
မြင်းခြံမြို့နယ် ရွှေပြည်သာရွာတစ်ရွာလုံး မုန့်ဟင်းခါးအလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူ အနုပညာသရုပ်ဆောင် ငြိမ်းမြတ်သူဟာဆိုရင်တော့ tiktok ပေါ်ကနေ လူသိများလာခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ…။ ရုပ်အရမ်းကြီး မလှပေမယ့် စိတ်သဘောထား အလွန်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်…။ ခုဆိုရင်လဲ မြင်းခြံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ရွှေပြည်သာရွာမှာ တစ်ရွာလုံးစားနိုင်ဖို့ မုန့်ဟင်းခါး အချိန် ၂၀၀ ဖြင့် အလှူဒါနလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်…။ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ ငြိမ်းမြတ်သူရဲ့ အလှူဒါနလေးကို ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ…။ photo credit unicode မွငျးခွံမွို့နယျ ရှပွေညျသာရှာတဈရှာလုံး မုနျ့ဟငျးခါးအလှူလုပျခဲ့တဲ့ ငွိမျးမွတျသူ အနုပညာသရုပျဆောငျ ငွိမျးမွတျသူဟာဆိုရငျတော့ tiktok ပျေါကနေ လူသိမြားလာခဲ့ပွီး သရုပျဆောငျတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့တာပါ…။ ရုပျအရမျးကွီး မလှပမေယျ့ စိတျသဘောထား အလှနျကောငျးတဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ…။ ခုဆိုရငျလဲ မွငျးခွံမွို့နယျမှာရှိတဲ့ ရှပွေညျသာရှာမှာ တဈရှာလုံးစားနိုငျဖို့ မုနျ့ဟငျးခါး … Read more
နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဘဏ်တွေရှေ့မှာ ငွေထုတ်ဖို့အချိန်အကြာကြီး တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအား သတိပေးစကားတစ်ခွန်း ပြောလာတဲ့ မေဦး
ပြည်သူများက သူတို့ စုဆောင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ဘဏ်များတွင်သာ အပ်နှံလေ့ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြည်သူများကရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် အနာဂတ်တွေကို ကြိုတင်မမှန်းဆနိုင်တော့ရုံသာမကဘဲ ဘဏ်များကိုလည်း ယုံကြည်မှုနည်းပါးလာပြီး သူတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံများကို လက်ဝယ်သိမ်းဆည်းထားချင်တာကြောင့် အခုလို မနက်အစောကြီးထကာ ဘဏ်ရှေ့များတွင် ပင်ပင်ပန်းပန်း စောင့်ဆိုင်းထုတ်ယူနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ပြည်သူများမှCurfew အချိန်ထက်စောကာ တန်းစီကြတာကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးလည်း ရှိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်း လစာများကို ငွေသားဖြင့် တိုက်ရိုက်မပေးတော့ဘဲ Mobile Banking များဖြင့်သာ လွှဲပေးကြတော့တာ ဖြစ်တာကြောင့် အခုလို ဘဏ်တွေရှေ့မှာ အချိန်အကြာကြီး စောင့်ဆိုင်းပြီး ငွေထုတ်ရတာ အတော်လေးကို စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း ဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာငွေအချင်းချင်း လဲလှယ်ပေးတဲ့ အပြင်ဈေးကွက်ကလည်း များစွာ မြင့်တက်နေတာကြောင့် မြန်မာငွေဈေးဟာ သိသိသာသာ ကျဆင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ကုမ္ပဏီများက ဘဏ်များတွင် Token စောင့်ဆိုင်းဖို့အတွက် လစာသတ်မှတ်ပြီး ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေကြတာကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်များတွင် မြင်တွေ့ ကြရမှာပါ။ဒီအခြေအနေကတော့ လက်ရှိပြည်သူတွေ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြသနာဖြစ်ပြီး အခုချိန်ထိတော့ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း မရှိသေးပါဘူး။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း Make-up artist မေဦးရဲ့Facebook အကောင့်တွင် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဘဏ်တွေရှေ့မှာ ငွေထုတ်ဖို့အချိန်အကြာကြီး တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေအား သတိပေးစကားတစ်ခွန်း ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” အနှစ်နှစ်အလလ ပင်ပင်ပန်ပန်းရှာဖွေထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ငွေတွေကို ကိုယ့်သဘောနဲ့လုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့ bank ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ချစွာယုံကြည်စွာအပ်နှံခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ မယုံကြည်ရတဲ့အခြေအနေမို့ ကိုယ်သဘောနဲ့ပဲကိုယ်ပိုင်ငွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့လုပ်တော့ရချင်သလောက်လိုသလောက်ထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ကိုယ့်ငွေကိုယ်ပြန်ထုတ်တာတောင်ဒီလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးဒုက္ခရောက်နေရရင် ဒီအာဏာရူးတွေအောက်မှာတခြားလူ့အခွင့်ရေးတွေအလုပ်အကိုင်တွေဘာတစ်ခုမှရဖို့ မရှိဘူးဆိုတာ ပြည်သူတွေပိုသဘောပေါက်ကြပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအာဏာရူးတွေကိုအမြစ်ပြုတ်အောင် ရတဲ့နည်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော်လှန်ကြပါ 💪🏻” လို့ ရေးသားဝေမျှလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေတစ်ချို့ကလည်း မေဦးရဲ့ ပို့စ်အောက်တွင် ဘဏ်တွေမှာ စောင့်ဆိုင်းရင်း ကြုံတွေ့နေကြတဲ့ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပြောပြထားကြပါသေးတယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကို နောင်လာနောင်သားတွေ မကြုံတွေ့ရစေရန် အရေးတော်ပုံကြီး အောင်မြင်ဖို့အတွက် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်။
ပေါက်ကွဲသံတွေကြောင့် ကလေးမြို့ကသွေးနုသားနု မိခင်တစ်ဦး သေဆုံး
ပေါက်ကွဲသံတွေကြောင့် ကလေးမြို့ကသွေးနုသားနု မိခင်တစ်ဦး သေဆုံး မေလ ၁၀ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ကလေးမြို့မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ ပေါက်ကွဲသံတွေကြောင့် မကြာသေးခင်က ကလေးမွေးထားတဲ့ အသက် ၄၁ နှစ် အရွယ် မဇာခြည်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ သူ့ရဲ့ ယောကျာ်းဖြစ်သူ ကိုပေါက်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ပေါက်ကွဲသံက ၃ကြိမ်ကြားရတာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်မှာ အခုလို သေသွားတာဖြစ်တယ်လို့ ကိုပေါက်ကြီးကပြောပါတယ်။ “သူက ကလေးမွေးထားတာမကြာသေးဘူး။ ညကပေါက်ကွဲသံက ၃ကြိမ်ကြားတာ။ ပထမပေါက်တုန်းကတော့ ဘာမ မဖြစ်ဘူး။ နောက်ဆုံးပေါက်ပြီးတော့ အခုလိုဖြစ်သွားတာ။” လို့ ကိုပေါက်ကြီးက ပြောပါတယ်။ သေဆုံးသူမှာ နှလုံးရောဂါအခံရှိပြီးတော့ဆေးစားလို့ သက်သာနေပြီလို့လဲဆိုပါတယ်။ သူမှာ လသားကလေးတစ်ယောက်ကျန်ရစ်ပြီးတော့ မဂ်လာဥယျဉ်ရပ်ကွက်နေထိုင်သူပါ။ သေဆုံးသူ ရဲဈာပနကိုဒီနေ့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ credit unicode ပေါကျကှဲသံတှကွေောငျ့ ကလေးမွို့ကသှေးနုသားနု မိခငျတဈဦး သဆေုံး မလေ … Read more
ဒီအခြေခံတွေသိထားရင် သင်အိမ်ဆောက်လို့ရပြီ(အိမ်ဆောက်နည်းအခြေခံသဘောတရားများ) မြေကြီးပုံသည့်အခါ တူးသည့်ကျင်း၏ ၂ပေ<သို့မဟုတ်> ၃ပေအကွာတွင် မြေကြီးပစ်ပုံထားရမည်။မြေကြီးပြန်လည်ဖို့သည့်အခါ တစ်ကြိမ်လျှင် ၆လက်မ အလွှာလိုက်ဖို့ပြီး သိပ့်သည်းအောင် ရေဖြန်းဒင်ဆောင့် လိုအပ်သည့် သိပ့်သည်းမှု့ အနေအထားရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ * အဆောက်အဦအတွက် ပတ်တန်းရိုက်သည့်အခါ တောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ရိုက်၍ ပတ်တန်းတိုင်အား မြေအဝင် ၃ပေ<သို့မဟုတ်>၄ပေဝင်အောင်ရိုက်ထားသင့်ပါသည်။အဆောက်အဦ ကျင်တယ်ဖမ်းသည့်အခါ အဆောက်အဦတစ်ခု၏ သုံးချိုးတစ်ချိုးတွင်ဖမ်းရမည်။ ကျင်တွယ်ဖမ်းနည်းကို အမျိုးမျိုးဖမ်းယူတတ်ကြသည်။ဥပမာ(၃၊၄၊၅)(၆၊၈၊၁၀) (၁၅ ၊ ၂၀၊ ၂၅) တို့ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖမ်းယူတတ်ကြသည်။* အုတ်မစီခင် အုတ်ကို နှစ်နာရီ ကြိုတင်၍ ရေစိမ်ထားရမည်။(သို့မဟုတ်)ရေလောင်းပေးရမည်။ * (၇)ပေအမြင့်ရှိသော ၊ (၇)ပေထက်ကျော်သော Slabဆိုလျှင် အနည်းဆုံး(၁၀)ရက်ထားပြီးမှ ဖြုတ်ရပါမည်။ * Slabလောင်းပြီး ( ၂ ) ရက်အတွင်း ကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုင်းအပေါ် မည်သည့် … Read more
နာမညျကိုသိရုံနှငျ့ စိတျဓါတျကို သိနိုငျအောငျ တှကျနညျး…
သငျ့ရဲ့ နာမညျကို ကွညျ့ပွီး သငျ့ရဲ့ စိတျနေ သဘာဝ ကို အကွမျးဖငျြး တှကျ လို့ ရတဲ့ နညျး ရှိတယျ။ သငျ့ရဲ့လူသိမြားသောအမညျကိုအော ကျပါအတိုငျးတှကျပါ။ အ-အာ-ဥ-ဩ-ဧ = ၁ က-ခ-ဂ-ဃ-င. = ၂ စ-ဆ-ဇ-ဈ-ည. = ၃ ယ-ရ-လ-၀. = ၄ ပ-ဖ-ဗ-ဘ-မ. = ၅ သ-ဟ. = ၆ တ-ထ-ဒ-ဓ-န-ဌ. = ၇ ဥပမာတှကျပွမယျ ပနျး အိ ဖွိုး = ၅ + ၁ + ၅ = ၁၁ ရပါတယျ ၁၁ ထဲကနေ ၁၀ ကို နှုတျပါ (၉နဲ့ … Read more
*စာအရှည်ကြီး ရေးတင်မိသော ဝရမ်းပြေးမ ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူနေသော ကိုယ်ဝန်ဆောင် မတ်မတ်မြ *
*စာအရှည်ကြီး ရေးတင်မိသော ဝရမ်းပြေးမ ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူနေသော ကိုယ်ဝန်ဆောင် မတ်မတ်မြ * အရေးတော်ပုံကာလမှာ လူတိုင်းဟာ ရင်းနှီးထားရတာချည်းပါပဲ တစ်ချို့ကလေးတွေ တစ်ချို့မိဘတွေ လောကကြီးထဲ မရှိတော့ဘူး တစ်ချို့ ထမင်းဝိုင်းတွေဟာ ခြောက်ကပ်နေကြပါပြီ လူတိုင်းဟာ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ ရင်းနှီးပေးဆပ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြရတာပါပဲ Gen Lee နဲ့ ဒလန်တွေ သာကူးလောက်ကောင်တွေကလွဲလို့ အာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ CDM စလုပ်ကြရင်း ကျန်ဌာနတွေပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြလို့ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ CDM ဖြစ်လာကြချိန်ကတည်းကStrong CDM နဲ့ သူများအကုန်လုပ်လို့ လုပ်လိုက်ရတဲ့ auto CDM တွေ ရှိသလို Non CDM ဘောမတွေလည်း ရှိခဲ့တာပါပဲ Strong CDM သမားတွေကတော့ ဘာတွေပဲကြုံကြုံ နေရေးစားရေးခက်ခဲလည်း အသက်ပေးခဲ့ရသူတွေ ထောင်ထဲကအကျဉ်းချခံနေရသူတွေကို … Read more
သားနဲ့ သမီးလေးကို တွေ့ချင်လို့ ငိုပြီးတွေ့ခွင့်က လေး တောင်းခဲ့ ပေမယ့်လည်း တွေ့ခွင့်မရ ခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးတို့ ဇနီးမောင်နှံ(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
သားနဲ့ သမီးလေးကို တှခေ့ငျြလို့ ငိုပွီးတှခှေ့ငျ့က လေး တောငျးခဲ့ ပမေယျ့လညျး တှခှေ့ငျ့မရ ခဲ့တဲ့ ပွတေီဦးတို့ ဇနီးမောငျနှံ ပရိသတျ အခဈြတျော ကိုပွတေီနဲ့ မအုဝဲတို့ ဟာ တျောလှနျလေး ကာလမှာ ပွညျသူတှေ အားလုံး အတူ ရှကေ့နေ မားမားမတျမတျ ရပျတညျပေးခဲ့ တဲ့ အနုပ ညာရှငျတှပေါ။ မတျ လက ပွုလုပျ ခဲ့တဲ့ နှဉေီးတျောလှနျရေးမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ အတှကျ စ ဈကောငျစီရဲ့ အလိုရှိဆုံး စာရငျးထဲ ပါဝငျခဲ့ပွီး တော့ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျ နခေဲ့ရတာ ဖွဈပါတ ယျ။ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျ နစေဉျမှာလဲ သူတို့ ရဲ့ သားလေးနဲ့ သမီးလေးကို တှခှေ့ငျ့ မရခဲ့ကွပါဖူး။ သားသမီး … Read more
မုံရွာမြို့ စက်္မှုဇုန်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်ပြာကျ
မုံရွာမြို့ စက်္မှုဇုန်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်ပြာကျ ယမန်နေ့ မေလ ၁၀ ရက် ည ၁၀ နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် မုံရွာမြို့ စက်မှုဇုန်ရပ်ကွက်၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မီးသတ်ကားများလာရောက် ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ပေမယ့် ပြာကျလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ Photo cJ unicode မုံရှာမွို့ စက်ျမှုဇုနျရပျကှကျ အုပျခြုပျရေးမှူးရုံး မီးလောငျပွာကြ ယမနျနေ့ မလေ ၁၀ ရကျ ည ၁၀ နာရီဝနျးကငျြခနျ့တှငျ မုံရှာမွို့ စကျမှုဇုနျရပျကှကျ၊အုပျခြုပျရေးမှူးရုံး မီးလောငျမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီး မီးသတျကားမြားလာရောကျ ငွှိမျးသတျခဲ့ပမေယျ့ ပွာကလြောငျကြှမျးပကျြစီးသှားခဲ့သညျဟု သိရှိရပါသညျ။ Photo cJ မုံရွာမြို့ စက်္မှုဇုန်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်ပြာကျ ယမန်နေ့ မေလ ၁၀ ရက် ည ၁၀ နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် မုံရွာမြို့ စက်မှုဇုန်ရပ်ကွက်၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး … Read more